antsasaka tany eto Mcar amidy amin'ny koreana Tatsimo - Dinika forum.serasera.org
antsasaka tany eto Mcar amidy amin'ny koreana Tatsimo
Fitohizan'ny hafatra : antsasaka tany eto Mcar amidy amin'ny koreana Tatsimo
raberesaka - 19/12/2008 15:16
Ity lahatsoratra ity de avy tamina conference de presse nataon'ny Tangalamena ZAKARIASY Patrick ny zma 19 des 2008.
Anjarantsika ny mieritreritra izay hanjo an'i Mcar sy ny taranany afaka 99 taona.
Misy zavatra mitranga eto Mcar izay tsy ahitana fanafany fa toa te hitondra any amin’ny tsy filaminana. Ka ny anjara birikin’ny ray aman-dreny ara-panahy no ho entiko @ maha tangalamena ny tenako.
Inona no zava-misy ?
Vaovao avy any ivelany : Namoaka vaovao ry zareo Britanika (Financial Time/BBC) fa lasan-dry zareo Koreana tatsimo ny antsasamanilan’ny tany mamokatra eto Mcar hambolena katsaka (faritra andrefana) sy palmier à huile (faritra atsinanana) mandritra ny 99 taona @ velaran-tany mitetina 1,3 tapitrisa Ha mba hanamafisany ny fiarovantena ara-tsakafo any aminy satria i Korea dia faha 4 maneran-tany @ fanafarana katsaka ary ny tsena iraisam-pirenena mikasika ny huile de palme dia mahatratra 50.000 t/an, izany hoe ambony dia ambony ny demande mondiale.
Nefa ny takalon’izany zavatra rehetra izany dia mazava ho azy fa tsy misy afa-tsy ny fanomezan’asa ny malagasy sy ny fanamboaran-dalana ary ny fananganana fotodrafitrasa hilaina amin’ny famokarana.
Taitra noho izany zava-misy izany izao tontolo izao. mifanaretsaka ny vaovao tato ho ato momba an’i Mcar fa saingy ny eto an-toerana tsy mahalala ny zavatra miseho noho ny zava-misy iniana afenina.
- Daewoo gagne le gros lot
- Daewoo to cultivate land fory free/titre du Financial Time
Noho izany, maro ireo manahy :
- Manahy ry zareo ao @ firenena mikambana fa vonona hanjanaka any Mcar i korea, izay heverina ho toy ny Pacte néocolial ifanaovan’ny malagasy sy ny koreana.
- Manahy ny frantsay ary nanamarika ny sekreteram-panjakana ao amin’ny coopération fa ny fidiran’ny famatsiambola avy any ivelany dia tsy azo atao raha tsy misy ny fiarovana ny vahoaka manoloana ny krizy ara-tsakafo.
- Manahy ny gasy any ivelany satria tsy hipetraka intsony ny atao hoe tanindrazana.
Satria i Mcar dia firenena anisany mahantra indrindra maneran-tany, mandry tapatsinay, tsy mahavita tena ara-tsakafo nefa 75% ny vahoaka dia tantsaha mpamokatra avokoa.
tsy misy anefa ny mangarahara manodidina ity resaka ity :
- Ny volana May tonga teto ny delegasiôna mafonja Koreana
- Ny volana Jolay niverina izy ireo nanao fifanekena t@ firenena malagasy
- Teo dia nibitaka ry zareo koreana fa azony maimaim-poana ny antsasaky ny tany mamokatra eto Mcar satria efa voasonia ny contrat
Nandà izany vaovao izany avy hatrany ny Governemanta malagasy fa tsy mbola nisy akory ny fifanarahana voasonia hatreto fa mbola eo andalam-pandaminana ny zava-drehetra. Saingy tsy nolaviny kosa anefa ny votoatin-dresaka rehetra momba ny bail emphytéotique de 99 ans, ny fanomezana maimaimpoana ny velarantany 1,3 tapitrisa Ha. noho izany dia tsy azo lavina mihitsy fa efa mipetraka izany ny accord de principe.
Heverin’izao tontolo izao anefa fa zava-poana ireo contrepartie ireo manoloana ny famatotan’i malagasy ny tanindrazany.
Ny zava-misy eto an-toerana :
Namoaka ny zava-misy marina ny gazety an-tsoratra izay nanokana matoan-dahatsoratra t@ izany.
T@ volana oktobra, nandalo tany Toamasina ny tenako no nahitako ny demande d’acquisition de terrain nataon’i Mcar future entreprise» tao @ direction domaniale izay mitentina 33767 Ha manomboka ao Andovoranto hatrany Tampina (Brickaville) ary 94182 Ha manomboka ao Tampina hatrany Foulpointe (Tamatave II), izany hoe faritra atsinanana iray manontolo iny.
Hendratra be ihany aho raha namakafaka sy nandalina ny zava-misy hitako tamin’io fotoana io. sanatria ve dia hamidy i mcar ?
Vahotra ny lelako hilaza amin’ireo mpiray tanindrazana amiko ny tetikasa fampandrosoanahaingana sy maharitra any Mcar izay eritreretin’ny mpitondra.
Nasaina teny Iavoloha aho tamin’ny Loabary andasy. Navoitrako teo anatrehan’ny Filoham-pirenena ny ahiahiko nanao hoe « sao lahy mba mifanohitra @ MAP izao zava-misy izao». Ny valin-teny azoko anefa dia nahatorovana ny foko sy ny saiko. hoy ny Filoham-pirenena nanao hoe « Ngeza i Mcar 584000 km2, tsy ampahafirin’izany velaran-tany resahinao izany, ary ny tanjona eto dia hitovizana @ any ivelany, izany hoe 15% ny mponina ihany no mpamboly fa ny 85% mponina eny an-drenivohitra. Hamboarina ny lalana dia olona avy any Brickaville mitady asa any Fort Dauphiny.
Ny hevitro momba izao toe-javatra izao, hoy ity Tangalamena :
- Ekena fa midadasika i Mcar nefa voafetra ihany ny tany malemy azo hamokarana. Raha 2500 tapitrisa Ha ny totalin’izany dia ny antsasany (1,3 tapitrisa Ha) lasan’ny vahiny Koreana avokoa hanaovana voly tokana na monoculture izay tsy ho hisy fiantraikany mivantana eo aminn’ny fahavitan-tena ara-tsakafo ny malagasy sy ny fiarovan-tena aratsakafony manoloana ny krizy iraisam-pirenena.
- Raha faritra atsinana manokana no jerena dia ny lemaka rehetra no voafaoka ao anatin’io 150000 Ha io, izay tsy hanome asa afa-tsy 6500.
- Tsara ho marihina fa kely dia kely ny tombontsoan’i Mcar ao anatin’ity tetikasa ity satria projet d’extraction no ho atao : izany hoe fambolena fotsiny no atao eto Mcar fa ny vokatra voaoty rehetra dia ahondrana any Korea atsimo à l’état brut. Tsy ho eto Mcar izany ny usine no hatsangana fa any ivelany.
- Raha transfert de technologie no resahina dia maro ireo tetikasa goavana efa nentina teto @ firenena fa tsy nitondra fanovana teo amin’ny malagasy, potika daholo izany ankehitriny
- Raha lalana no resahina dia stapa fa na ny vola na ny fitaovana entina mivezivezy @ izany dia mampanano sarotra ny malagasy satria tsapa fa mihena ny salan’isa eo @ fandaniana solika eto Mcar noho ny tsy fahefa-mividy
- Raha foto-drafitrasa kosa dia ny tompony ihany no hahazo tombontsoa mivantana amin’izany.
Fehiny, noho izany,@ maha teknisiana ny tenako dia mahatsapa aho fatsy hitondra vahaolana maharitra ho an’ny firenena ny tetikasa hoentin’ny mpitondra malagasy satria lasa hatao varoboba ny tanindrazana mba hanatanterahana ny fanamby @ fanamboaran-dalana sy ny fotodrafitrasa goavana voalazan’ny Map.
Mametraka olam-pitantanana na probleme de gouvernance izao zava-miseho izao satria hevitra petatoko tsy mamaha ny olana mianjady amin’ny 75% ny malagasy izay tantsaha mpamokatra mila fitaovana sy masomboly ary zezika ho entina manajary ny tany.
@ maha Tangalamena ny tenako dia ny tangalamena dia jiro na fanilo ho an’ny taranaka hitarika azy ireo amin’ny lalana marina no sady tandroka aron’ny vozona. Miaro amin’ny loza sy atambo rehetra mety hiseho. Izy ihany koa no kitro hifaharan’ny madinika manoloana ny tsindry azo lena rehetra mety hitranga.
Koa manoloana izany adidy masina izany dia tsy afaka hangina ny tenako fa sao hazahoako tsiny @ mpiray tanindrazana sy ny taolam-be tsy mitapaka rehetra izany. Ny tangalamena tokoa mantsy no vodivona hivoahan’ny trandraka dia eto aho : manaitra ny malagasy tsy vakivolo rehetra na eto an-toerana na any ivelany (Diaspora) handinika akaiky sy hamakafaka lalina izao zava-misy eto @ tany sy ny fanjakana izao. Manaitra ireo ray aman-dreny izay vovonana hiadin’ny lohany sy ny varivary fandrin’ny tafo mba hifanome tanana handinihana ny ho avin’ny taranaka. Manaitra ny tanora maitso volo izay voara endriky ny saha sy ny tongolo mangafaka ny tanindrazana mifohaza ny saina amam-panahy hiara-hijery sy handinika ny ho avin’ny firenena.
Eto ampamaranana dia manamafy aho fa tsy amidy sady tsy atakalo i Mcar tanindrazana iombonantsika malagasy tsy ankanavaka. Isika rehetra tokoa mantsy faladia nahary ny lalana no sady vary zato naharo ny sompitra koa aza mitoky rahalahy mahay mandrafitra ka hitondra hazo bingo avy any an’ala fa tsy lany akory ny hazomanga ka zozoro no hatao tehina.
Andribe - 19/12/2008 21:47
tsy aleo ve aloha ry lerony hiditra de refavieo ovaina ny contrat raha mahavita hipitsika ndray izy. Asiana sous reserve fotsiny de samy miala